Focus Beauty ရဲ့ June Promotion မှာတော့ Sleeping Cream နဲ့ Lotion ထပ်တိုးပေးထားပါတယ်။ ဒီ Promotion လေးတွေက အသစ်ဝင်မယ့် Agent တွေအတွက်လဲ အမြတ်တွေ များများ ရမှာနော် ? Promotion က June လ တစ်လတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ? Snail Wish Whitening Cream တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC New Skiin All In One Tone Up Cream (၁၀) ထုပ်အပြင် Snail Wish Whitening Cream (၁) ဘူး ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin All In One Tone Up Cream တစ်ခါတည်း အထုပ် (၁၀၀) ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ပုံမှန် လက်ဆောင် (၅) ထုပ် အပြင် နောက်ထပ် အပို (၅) ထုပ် စုစုပေါင်း (၁၀) ထုပ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin Whitening Selfie Face Mask တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ပုံမှန် လက်ဆောင် (၂) ဘူး အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁) ဘူး စုစုပေါင်း (၃) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin Skin Reborn Solution တစ်ခါတည်း (၁၀) ဘူး ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၁)ဘူး အပြင် Garnier Essence (၂) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin Foam Cleanser တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၂)ဘူး အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁) ဘူး စုစုပေါင်း (၃) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Better Skin Coffee Soap Scrub တစ်ခါတည်း (၂) ဒါဇင် ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၂) တုံး အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁) တုံး စုစုပေါင်း (၃) တုံး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? 24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေး တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၂) ဘူး အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁)ဘူး စုစုပေါင်း (၃) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၂) ဘူး အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁)ဘူး စုစုပေါင်း (၃) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၂) ဘူး အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁)ဘူး စုစုပေါင်း (၃) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Beaute Cafe တစ်ကြိမ်ထဲ အထုပ် (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၂) ထုပ် အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁) ထုပ် စုစုပေါင်း (၃) ထုပ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Ketchup Matte Liquid Lipstick တစ်ခါတည်း (၂၀) ချောင်း ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC Lipstick (၂) ချောင်း အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁) ချောင်း စုစုပေါင်း (၃) ချောင်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Nano Brush တစ်ကြိမ်ထဲ အခု (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန်လက်ဆောင် (၂) ခု အပြင် နောက်ထပ် (၁) ခု စုစုပေါင်း (၃) ခု ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Nano Spray တစ်ကြိမ်ထဲ အခု (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန်လက်ဆောင် (၂) ခု အပြင် နောက်ထပ် (၁) ခု စုစုပေါင်း (၃) ခု ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ February Promotion လေးလာပါပြီ ဒီလ End Year Bonus Target ပိတ်ပြီဆိုတော့ February တစ်လ ရမယ့် အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်မခံသင့်ဘူးနော် ? Snail Wish Whitening Cream တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC New Skiin All In One Tone Up Cream (၁၀) ထုပ်အပြင် Snail Wish Whitening Cream (၁) ဘူး ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin All In One Tone Up Cream တစ်ခါတည်း အထုပ် (၁၀၀) ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ပုံမှန် လက်ဆောင် (၅) ထုပ် အပြင် နောက်ထပ် အပို (၅) ထုပ် စုစုပေါင်း (၁၀) ထုပ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin Whitening Selfie Face Mask တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ပုံမှန် လက်ဆောင် (၂) ဘူး အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁) ဘူး စုစုပေါင်း (၃) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin Skin Reborn Solution ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် အရင်ပေးထားတဲ့ (၁၀) ဘူး ဝယ် FOC (၁) ဘူးအစား (၅) ဘူးဝယ်ရင် FOC (၁) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပြီး (၁၀) ဘူးဝယ်ရင်တော့ FOC (၂) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin Foam Cleanser တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၂)ဘူး အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁) ဘူး စုစုပေါင်း (၃) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Better Skin Coffee Soap Scrub တစ်ခါတည်း (၂) ဒါဇင် ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၂) တုံး အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁) တုံး စုစုပေါင်း (၃) တုံး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? 24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေး တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၂) ဘူး အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁)ဘူး စုစုပေါင်း (၃) ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Ketchup Matte Liquid Lipstick တစ်ခါတည်း (၂၀) ချောင်း ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC Lipstick (၂) ချောင်း အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁) ချောင်း စုစုပေါင်း (၃) ချောင်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Nano Brush တစ်ကြိမ်ထဲ အခု (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန်လက်ဆောင် (၂) ခု အပြင် နောက်ထပ် (၁) ခု စုစုပေါင်း (၃) ခု ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Nano Spray တစ်ကြိမ်ထဲ အခု (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန်လက်ဆောင် (၂) ခု အပြင် နောက်ထပ် (၁) ခု စုစုပေါင်း (၃) ခု ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Beaute Cafe တစ်ကြိမ်ထဲ အထုပ် (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC (၂) ထုပ် အပြင် နောက်ထပ် အပို (၁) ထုပ် စုစုပေါင်း (၃) ထုပ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
New Skiin Skin Reborn Solution ရဲ့ Promotion လာပါပြီ ? August လ တစ်လလုံး ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် အရင်ပေးထားတဲ့ ၁၀ ဘူး ဝယ် FOC ၁ ဘူးအစား ၅ ဘူးဝယ်ရင် FOC ၁ ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ၁၀ ဘူးဝယ်ရင်တော့ ၂ ဘူး FOC ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ⭐️ Promotion က ဒီ August တစ်လ ထဲနော် ⭐️
Better Skin Soap ရဲ့ အရမ်းတန် Promotion လာပါပြီ. July လနဲ့ August လအတွင်း Better Skin Soap ၅ ဒါဇင်၀ယ်ယူတိုင်း ထပ်ဆောင်းအပို ၅ တုံးကို ရယူလိုက်ပါ. ၅ ဒါဇင်တစ်ခါတည်း၀ယ်ယူမှ ရရှိမယ့် Promotion ဖြစ်လို့ ၅ ဒါဇင်ပြည့်အောင် ၀ယ်ဖို့တော့ လိုမယ်နော်.